Dib-u-habeyn ama sida loo abuuro dhibco dib loogu soo celiyo Linux | Laga soo bilaabo Linux
Dib u soo celinta nidaamka ama sida loo abuuro dhibco soo celin ah Linux
Nidaamku waa codsi aad u faa'iido badan oo kuu oggolaanaya inaad sameysid nuqullo nuqul ah oo aad abuurto dhibco dib u soo celin ah oo nidaamkaaga ah, oo ah adeeg ay u isticmaali jireen Windows / Mac hubaal. Intaa waxaa dheer, Systemback waxaa ku jira dhowr shaqooyin dheeri ah, sida sameynta CD toos ah oo lagu rakibi karo oo ku saleysan nidaamkaaga.
1 Tilmaamaha ugu muhiimsan ee nidaamka
2 Ku rakibida
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee nidaamka
Markaan barnaamijka fureyno waxaan isla markiiba helnaa xulashooyinka soo socda:
Qaado nidaam kayd ah
Soo celinta nidaamka
Samee CD toos ah
Intaa waxaa dheer, Systemback wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto oo aad maamusho qodobbada dib u soo celinta, nuqul nidaamka nuqullada kale ama qormooyinka, isku-dubbarido galka HOME hal guji oo keliya, nuqul keliya faylalka gaarka ah ama qeeybinta iyo / ama ka saar nooc kasta oo feyl ah waqtiga sameynta keydka.
Sidoo kale, waxaa habboon in la sheego astaamo, sidaan qabo, ka dhigayo Systemback qalab soo kabasho dhammaystiran (oo aan ahayn oo keliya codsi kayd ah). Waxaan ula jeedaa in Nidaamka Nidaamku u oggol yahay inuu soo celiyo / saxo khaladaadka ku jira bootloader Grub2.
Muuqaal kale oo kala soocaya Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamyada Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamyada kale ee kala sooca Nidaamka Nidaamka Qalabka Dhaqanka ee soo jireenka ah waa suurtagalnimada abuurista soo-kabasho toos ah oo ku saleysan nidaamkeenna, taas oo u oggolaanaysa in lagu rakibo kombuyuutarrada kale si fudud
Fur terminal oo geli amarada soo socda:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Dib u soo celinta nidaamka ama sida loo abuuro dhibco soo celin ah Linux
Waxay umuuqataa mid faa iido badan oo fududahay in la isticmaalo, waan siinayaa iskuday, inkasta oo hada aan kusii dhaweynayo tan kale ee fudud ee uu bixiyo amarka dd:
dd haddii = / dev / sda1 ee = soo celinta.img
Waad ku mahadsan tahay warbixinta, aad u wanaagsan.
Waxaan eegay Debian Jessie waxaanan ogaaday in markii la taageerayo waxa ay qabato ay tahay nuqul ka mid ah dhammaan nidaamyada xididdada oo aan ahayn sawir. Ma xuma, in kasta oo ay fiicnaan lahayd haddii aad ku kaydin lahayd nuqul soo celinta nuqulada NTFS ee qaabka .img sida amarka "dd" weyn uu sameeyo.
Ikhtiyaarka "nidaamka nuqul" ma fahmi karo maxaa yeelay waxay i weydiineysaa inaan doorto qayb ka mid ah xatooyada xitaa waxay i weydiineysaa haddii aan doonayo inaan qaabeeyo, waxay umuuqataa inay isku dayayso inay rakibto halkii ay ka koobiyeyn lahayd Waxaan eegay "man systemback" laakiin waa mid kooban, buug yar ayaa ku fiicnaan lahaa in laga fogaado in lagu jahawareeriyo jahliga darteed.
Marka la eego ikhtiyaarka "rakibida nidaamka", waxay kaliya ii ogolaaneysaa inaan ka rakibo nidaamka socda ee hadda jira, taas oo ka dhigaysa mid aan la qaadi karin.
Marka la soo koobo (aragtidayda), in si fudud loo soo celiyo qodobbada waa barnaamij wanaagsan. Xitaa sidaas oo ay tahay, amarka "dd" weyn ee fudud ee aniga ayaa igafiican sababtoo ah kala duwanaanshaheeda iyo fudeydkiisa, labadaba soo celinta qodobbada, iyo nuqul ka qaadista nidaamka sawir, iyo sidoo kale ku rakibida qalab kale, ha ahaato USB ama disk gudaha ah.
Waxaan ilaaway inaan xuso ikhtiyaarka ah in la abuuro nidaamyo "nool" oo aanan isku dayin, haddii qof lagu dhiiri geliyo inuu faallo ka bixiyo sida ay wax u socdaan iyo haddii nidaamka lagu rakibo karo marka toos looga bilaabayo.
Waad ku mahadsan tahay faallooyinkaaga oo aad ka tagtay aragtidaada.
Waa run, sida muuqata marka la sameynayo keydka sawir ma sameynayo laakiin nuqulada "aasaasiga ah" ma jiraan wax kale ... sidoo kale, markii la abuurayo nooca Live-ka ah ee aad meeshaada ku joogeyso, waxaan u maleynayaa inay sameyso sawirka.
Si aan runta u sheegno, barnaamijkani wuxuu faa iido badan u leeyahay in lagu rakibo dadkayga aan haysan aqoonta lagama maarmaanka u ah isticmaalka amarka dd, maaddaama ay u baahan tahay aqoon ka hor inta aan la istcimaalin maxaa yeelay sida ay u fududahay in la kala baxo haddii aadan hubin waxa in la sameeyo.
Dib-u-hagaajinta way ka fududdahay, riix badhanka, xitaa waxay leedahay saacad.
Ka dib arinta ah in aan la sameyn sawirka laakiin la koobiyeeyo tusayaasha "bareback" waan ka fikiray oo waxaan u maleynayaa inay sidan uga fiican tahay barnaamijkan, maadaama hadii qeybta asalka ahi ay ku jirto boqolaal gigabytes, mabda 'ahaan sawirka la abuuray wuxuu qaadan lahaa boqolaal gig (waxaan ku tiirsannahay dhaqanka amarka "dd").
Sidaa darteed waxaan u maleynayaa inay tahay barnaamij weyn, oo lama huraan ah oo ay weheliso "dd" -da quruxda badan:
Dib-u-habeyn -> loogu talagalay cusbooneysiinta cusub ama kuwa leh qayb aad u ballaaran oo xidid ah.
DD -> dadka si fiican u yaqaana waxa barnaamijku qabto, maxaa yeelay shits weyn ayaa lagu goyn karaa ilbidhiqsiyo gudahood. Waa lagama maarmaan mabda 'ahaan in xididku yar yahay si aan loo abuurin sawirro boqolaal gig ah.
Mar labaad waad mahadsantahay Pablo, farxad!
Waad ku mahadsantahay adiga x comment!
Habsiin weyn! Bawlos.
Haye, ma ii sheegi kartaa qaabeynta amarka aad xustay "dd", waxa dhacaya ayaa ah inay igu dhacday marar badan aniga oo cusboonaysiiya nidaamka khaladna la saxo oo qof walba naar galo.
Waxaan isticmaalaa manjaro xfce
The .img ee qeybta sda1 ayaa la soo saaray, miyaan wax ka bedeli karaa miiska kala-goynta oo kor ayaan ku dhaji karaa .img-kii hore ee sda1?
Ku jawaab braybaut
ciise israaiil perales martinez dijo
Wax la mid ah laakiin fedora, ma aanan heli karin rpm 🙁
Jawaab ciise ciraaq israaiil martinez
Wanaagsan, waxaan rajeynayaa inay hadda shaqeyso oo aan u badalayo nidaamkeyga SSD oo aan ku wado wadista adag ee Guriga.
Waad ku mahadsan tahay soo gelinta, laakiin waxaan u baahanahay inaan xuso in systemback-gui sidoo kale loo baahan yahay in la rakibo.
Heck, ma aanan hayn xogtaas! Waad ku mahadsantahay tabarucaadka!
wey fiicnaan laheyd haddii aad adeegsato awooda btrfs
Waxaa jira barnaamij noo ogolaanaya inaan abuurno iskudhafyadeena oo aanan xasuusanin waxa loogu yeero. (Marnaba ma isticmaalo) taas oo, sida ay sheegaan, abuuraya iso iso macquul ah ... haday saas tahay, way kufiicantahay inaad marwalba haysato CD leh sawirka «our »Distro (maxaa yeelay linuxero kasta waxaan u qaabeynaa midka asalka ah) oo hadii wax nagu dhacaan, dib u rakibo ... dabcan waxaa ka wanaagsan inaan helno dhibic soo celin ah sidaan ku heysanay daaqadaha ... Waan isku dayi doonaa ... mahadsanid.
Waxaan isku dayayaa inaan rakibo barnaamijkan, laakiin waxay i weydiineysaa waxyaabaha soo socda:
** Isbedelka warbaahinta: Fadlan geli saxanka ku calaamadeysan sida
«Ubuntu 12.04.2 LTS _Precise Pangolin_ - Siidaynta i386 (20130213) **
Maxaad ii waydiinaysaa Markii aan rakibay Ubuntu 2 sano ka hor ma keydinin faylka .iso ka dib rakibaadda ...
Ku jawaab Zen
Wax fikrad ah kama haysto waxaad ka hadlayso .. 🙂
Goorma ayaad heshaa farriintaas? Goormaad rabtaa inaad rakibatid barnaamijka? Waa wax lagu qoslo, ma fahmin ... wax shaqo ah kuma laha arrintaas.
Nasiib darro in aysan noqon karin mid waxtar badan ...
Way i weydiineysaa markaan isku dayo inaan ku rakibo terminaalka. Waxaan raacayaa tilmaamaha ku qoran qoraalkan:
sudo apt-add-kaydinta ppa: nemh / systemback
sudo apt-hel rakib systemback
Hagaag, markaan dhigo safka ugu dambeeya, waxay i weydiisaneysaa rukhsad aan ku soo dejiyo X mb oo ka kooban korantadan. Waxaan ku idhi haa, ka dibna wuxuu isiiyaa fariinta aan kor ku sharaxay. Waa markii iigu horraysay ee aan arko oo waxaan rakibay / rakibay barnaamijyo kale oo badan kahor, mahelo :)
taasi waa sababta oo ah waad ka tagtay, ama waxaa la sameeyay kaliya xD, CD-ga waxaa loo qaybiyay qayb ka mid ah meelaha wax lagu keydiyo, ma aanan isticmaalin ubuntu muddo dheer, laakiin waxay raadineysaa wax la mid ah ilaha software-ka ama keydka, midka u dhigma CD-ga "waa la nadiifiyey"
Oo maxaa igu dhacaya hadda, ka dib markii in ka badan 2 sano rakibay barnaamijyo kale? Maxaa markaa kaliya loogula shaqeeyaa Systemback? : - /
Waayahay Hada waan fahmay. Waan xaqiijin karaa inay tahay sababta ay tiraahdo tete.
Waxaad ku shubtay cd-ga qayb ka mid ah keydadkaaga. Waa inaad aadaa ilaha softiweerka ee Ubuntu Software Center oo aad doorataa ikhtiyaarkaas.
Waayahay, waan sameeyay wixii aad tidhi, ugu dambayntiina, waxay umuuqataa inaan horeyba uhelay SYSTEMBACK. Kadib waxaan isku dayi doonaa inaan arko sida ay u shaqeyso, hadda waa inaan aado ...
Waad ku mahadsantahay tilmaamaha labada, Pablo iyo x11tete11x !!
Hagaag hadda waxaan isku dayayaa inaan isku xiro diskiga diiradeyda dd, laakiin waxay i siisaa dhibaatooyin. Si kastaba ha noqotee, ikhtiyaarka barnaamijkan ee liveCD, waxaan u maleynayaa inay fiicnaan karto.
Ku jawaab Thorzan
Horay! Markaas waad noo sheegi kartaa sida ay wax u dheceen Systemback.
Hagaag, waxay soo baxday in hargabkaygu furanyahaySUSE, manaanan ku guuleysan inay shaqeyso.
Maykel Franco Hernandez dijo
Waxaan u maleynayaa inaysan jiri doonin, laakiin waxaan la yaabanahay haddii systemback uusan aheyn archlinux? Hadday ku jirto ubuntu ppa shaki ayaan ka qabaa… Sidoo kale waxaan ka soo degsaday daamurka systemback-ka ee webka waxaana jira oo keliya .deb….
Jawaab Maykel Franco Hernández
Waxay umuuqataa inaysan ahayn.
Faylasha laga soo saaray LiveCD, xaggee uga tagtaa iyaga ...?
Ku jawaab BlackBit
Waxa aan raadinayay muddo dheer laakiin waan necbahay in tan kaliya loo heli karo bugbuntu waan ku farxi lahaa inaan waxan ku helo Opensuse: v
Waad salaaman tahay, barnaamij aad u wanaagsan, laakiin waxaan leeyahay hoos u dhac:
cd-ka live-ka ah waa mid weyn, dhammaystiran oo isku mid ah, laakiin markii kumbuyuutarka lagu dhejiyo ma xajinayo isticmaaleyaasha ama faylasha galka guriga.
Ma ogtahay waxa ku habboon?
Ku jawaab juan lopez
Waxay ahayd mid wax ku ool ah oo xiiso leh. Waxaan ku abuuray dhibic soo celin si guul leh. Waan arki doonaa haddii daqiiqadda dib u soo celinta (haddii ay weligeedba tahay waqtigeyga) ay shaqeyso. Farxad!
Waan ku faraxsanahay! Haddii aad waligaa xogta soo celiso, xor ayaad u tahay inaad la wadaagto natiijooyinka.
Waxaan kuu soo dirayaa habsiin weyn!
Ku jawaab jonathan
barnaamijkani si fiican uma shaqeynayo, maadaama barnaamijyada kale (filezilla) ay "cusbooneysiiyeen" waana SHAQOOYIN DHEER AH, ma sameynayo nuqulada markii aad u sheegto inaad sameyso, waxay ku siineysaa fariin "ma jiraan wax isbedel ah oo ku filan" markii aad cusbooneysiisay kala badh nidaamka. ???, MA mudna in la rakibo HORTA OBSOLETE. By the way, amarka dd wuxuu isiiyay qaladaad ka badan qori caaradii.Kuma talinaayo in loo isticmaalo waxyaalahan qofkasta iyo wax kayar oo laylis ah.
Ku jawaab leopoldo
Habemus Tanglu 1.0, Manjaro 0.8.9 iyo RC oo ka socda LMDE